Home Somali News Maleeshiyada Nusra oo weeraray Xarunta Sirdoonka Aleppo
Khasaaro xoogleh ayaa ka dhashay Weerar Arbacadii shalay ay xoogaga mucaaridka ee Siiriya ku qaadeen xarunta Sirdoonka ciidamada Siiriya oo ku taal Galbeedka magaalada labaad ee Aleppo.
Weerarkan ayaa waxaa hogaaminayey Jamhada Nusra ee Al Qacidada Siiriya, waxayna kaashanayeen qaar kale oo kamid ah xoogaga Mucaaridka.
Daarta weyn ee saldhiga u ah sirdoonka militariga Siiriya ayey doonayeen inay gacanta ku dhigaan xoogaga weerarka soo qaaday, walow ay ku fashileen inay la wareegaan xaruntaasi.
Dagaalkan ayaa ahaa kii ugu xumaa oo ka dhaca magaalada Aleppo maalmihii lasoo dhaafay waxaana la sheegay inay ku dhinteen 20 kamid ah askarta dowlada Bashaar Assad, halka dhinaca kale ay ka dhinteen 14 dagaalyahan.
Xoogaga weerarka qaaday ayaa la kulmay iska caabin xoogleh oo ay sameeyeen ciidamada xukuumada Bashaar Al Assad oo garab ka helaya maleeshiyaadka Shiicada ah ee Kooxda Xisbullah.
Dagaalka ayaa joogsaday kadib markii diyaaradaha dagaalka usoo gurmadeen ciidamada dowlada Siiriya, waxaana la sheegay inay dib halkaasi uga gurteen isbaheysigii weerarka soo qaaday.